ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : ကြေးနီတိုက်ပွဲကမွေးဖွားပေးလိုက်တဲ့သံမဏိမိန်းမသားနှစ်ဦး
ကြေးနီတိုက်ပွဲကမွေးဖွားပေးလိုက်တဲ့သံမဏိမိန်းမသားနှစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ မအေးနက်နဲ့ မသွဲ့သွဲ့ဝင်း တို့အကြောင်း နယူးယော့ခ်တိုင်းမ် New York Times သတင်းစာကြီးကပါ ဖွင့်ချ ချီးကျူးရပေပြီ။ လူထုကိုချစ်တဲ့ လက်ပန်တောင်းတောင်တွေကိုချစ်တဲ့ လူထုဒုက္ခတွေကို တိုက်ပွဲဝင်တောင်းဆိုတဲ့ ဖြူစင်တဲ့ ညီမငယ်များ အာဏာရှင်များရဲ့ ဒုက္ခပေးတဲ့ဘေးဘယာ အပေါင်းမှ ကင်းဝေးပါစေ
သူတို့တွေကို အရပ်ဝတ်နဲ့ ရဲတွေက ထပ် ကြပ်မကွာလိုက်တာခံခဲ့ရပြီး အာဏာပိုင် အချို့က “နွားမတွေ”လို့ ခေါ်တာခံခဲ့ရတယ်။ သူတို့ဟာ အချုပ်ထဲမှာ လေးညတိတိ အိပ် ခဲ့ရတာမှာ လူထုက မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ပြီး သူတို့ကိုလွှတ်ပေးဖို့ ၀ိုင်းတောင်းဆိုကြရတဲ့ အထိပါပဲ။
သူတို့ကတော့ အခုတလော နာမည် ကြီးနေတဲ့ မအေးနက်နဲ့ မသွဲ့သွဲ့ဝင်း ဆိုတဲ့ တောင်သူနှစ်ဦးပါပဲ။ သူတို့ဟာ အခြေခံ ပညာ လောက်ပဲ တတ်ပေမယ့် လက်ပန်း တောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းမှာသူတို့ ထက် အဆများစွာ အင်အားကြီးတဲ့ တပ်မတော်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုကြီးနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံက လက်နက်ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုရဲ့ လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုတို့ကို အံတုရင်းကနေ တစ်နိုင်ငံလုံးက သူတို့ကို သတိပြုမိကြတဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အပတ်စဉ်ထုတ် သတင်းဂျာနယ်တွေ ကတော့ သူတို့နှစ်ဦးကို မိမိထက် အဆ မတန် အင်အားကြီးမားသူများနဲ့ထိပ်တိုက် တွေ့ရဲသူ သတ္တိရှင်မိန်းမနှစ်ဦးအနေနဲ့ ရေး သားဖော်ပြကြပါတယ်။
“သူတို့ဘယ်လိုပဲ ဖိအားလာပေးပေး၊ ကျွန်မတို့ အလျှော့မပေးဘူး။ ကျွန်မတို့ ကတော့ ဒီစီမံကိန်းလုံးဝ ရပ်ဆိုင်းရတဲ့ အထိဖြစ်စေချင်တယ်”လို့ကြေးနီမိုင်းတွင်း နားမှာရှိတဲ့ သူတို့ရွာမှာလုပ်တဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ပြောပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ကြာသပတေးနေ့တုန်းက သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်က မြန်မာနိုင်ငံဟာ
ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆီကို “နောက်ကြောင်း ပြန်မလှည့်စတမ်း ခြေလှမ်းနေပါပြီ”လို့ ကုလသမဂ္ဂမှာ ပြောကြားသွားပါတယ်။ အစိုးရအနေနဲ့လည်း သိသာထင်ရှားတဲ့ဖြေ လျှော့ပြောင်းလဲမှုတွေကို လုပ်ဆောင်လျက် ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအပြောင်းအလဲ တွေဟာ လူဦးရေရဲ့ သုံးပုံနှစ်ပုံလောက် နေထိုင်ကြတဲ့ကျေးလက်ဒေသနေ ပြည်သူတွေရဲ့ ဘ၀နဲ့တော့ ကမ္ဘာခြားသလောက် ကွာဝေးနေတုန်းပါပဲ။ အခုတော့ ၀က်မှေးရွာတစ်ဝိုက်မှာ အာဏာပိုင်တွေဟာ အရင်လုပ်နေကျ ဖြစ် တဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှု၊ နှောင့်ယှက်မှုတွေကို ကျင့်သုံးနေတုန်းပါပဲ။
၀က်မှေးရွာဟာ စီမံကိန်းကြောင့် ရွှေ့ပေးရမယ့် ရွာပေါင်း ၂၀ ကျော်ထဲက တစ်ရွာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာမှာဒေသခံ အာဏာပိုင်တွေက အဲဒီမှာရှိတဲ့ ဘုန်းကြီး ကျောင်းကို ၀င်ဖျက်ဆီးပြီး ဗုဒ္ဓဆင်းတု တွေကို ယူဆောင်သွားတယ်။ စာသင် ကျောင်းတစ်ခုမှာဆိုရင်လည်း ပရိဘောဂ တွေ၊ တခြားပစ္စည်းတွေကို ဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ပြီး ဒေသခံရွာသားတွေ နေရာရွှေ့ပေးအောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလိုကိစ္စတွေ ကြောင့် ဆန္ဒပြမှုတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်လာ ခဲ့ပြီး ရဲနဲ့ထိပ်တိုက်တွေ့ခဲ့ကြတာမှာ အစိုးရ သစ်တက်ပြီးနောက်ပိုင်း အကြီးဆုံး ဆန္ဒပြ မှုတွေ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရဲတွေဘက်ကလည်းခပ် မာမာပါပဲ။ မသွဲ့သွဲ့ဝင်းတို့နှစ်ဦးကို ချုပ် ထားခဲ့တဲ့ မုံရွာရဲစခန်းရဲ့ စခန်းမှူး ဦးတင့်အောင်ကို ဘာလို့ ဒီအမျိုးသမီးနှစ်ယောက် ကို စောင့်ကြည့်နေရတာလဲ လို့ တယ်လီဖုန်း ဆက်ပြီးမေးရာမှာတော့ သူက ပြန်ပြီးအော် ငေါက်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေဟာ ဒီကိစ္စကို နိုင်ငံခြားသားတွေ စိတ်ဝင်စားမှာကိုလည်း မလိုလားကြပါဘူး။ နိုင်ငံခြားသတင်း ထောက် တစ်ယောက် အဲဒီကိုနှစ်ရက် လောက်သွားတော့ သူ့ကို မော်တော်ဆိုင် ကယ်နဲ့ လူတွေက တောက်လျှောက်လိုက် တာခံရသလို လ၀ကအရာရှိရဲ့တစ်နာရီ လောက်ထိန်းသိမ်းပြီးနောက်ကို ဒီနေရာ ပြန်မလာဖို့ သတိပေးတာကိုလည်းခံခဲ့ရပါ တယ်။ သူ့ရဲ့စကားပြန်ကိုလည်း ဖမ်းမယ် ဆီးမယ်နဲ့ ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒီကြေးနီစီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကျယ်ကျယ်အငြင်းပွားမှုတွေဟာ မအေး နက်နဲ့ မသွဲ့သွဲ့ဝင်းတို့နှစ်ဦးကို အာဏာ ပိုင်တွေက ပြုမူပုံတွေကြောင့်လည်း ဒီ လောက်အထိ ဂယက်ထခဲ့ရတာပါ။ “ဒီ အရေးကြောင့် သူတို့နှစ်ဦး သံမဏိမိန်းမတွေ ဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်။ ဒါသူတို့အတွက် သေ ရေး ရှင်ရေးပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ဒေသ ကို သူတို့ကာကွယ်ကြလိမ့်မယ်”လို့ မုံရွာ မြို့ခံ ကဗျာဆရာ ဦးအံ့မောင်က ပြောပါ တယ်။
ဒီအမှုအခင်းဟာ ဒီမိုကရေစီ အသွင် ကူးပြောင်းရေးရဲ့ စစ်မှန်းမှုကို စမ်းသပ် စစ်ဆေးမှု ကောင်းတစ်ခုပဲလို့လည်း ဦးအံ့ မောင်က ပြောပါတယ်။ ပြဿနာက လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက် မှာစတာပါ။ အစိုးရအာဏာပိုင်တွေက ဒီစီမံကိန်းအတွက် ဒေသခံတွေကို ရွှေ့ ပြောင်းခိုင်းပြီး အိမ်ရာအသစ်ဆောက်လုပ် ပေးတယ်၊ သူတို့ရဲ့သုံးလစာဝင်ငွေနဲ့ညီမျှ တဲ့လျော်ကြေးငွေကိုလည်း ပေးဖို့ ကမ်းလှမ်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသစ်ပေးမယ့် အိမ်ရာကတွေက ဖြစ်ကတတ်ဆန်းဆောက် ထားပြီး သူတို့လယ်တွေကို ဆုံးရှုံးရရင် ဘာမှလုပ်ကိုင်စားစရာ မရှိတော့ဘူးလို့ တချို့ကကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ ကမ်းလှမ်း ချက်ကို လူတချို့က လက်ခံခဲ့ရာမှာတော့ အာဏာပိုင်တွေက အစည်းအဝေး ခေါ်ပြီး တော့ ရွာသားအားလုံးကို ရွှေ့ပြောင်းပေးဖို့ ပြောပါတယ်။
“သူတို့က ကျွန်မတို့ကို အော်တယ်၊ တိရစ္ဆာန်တွေလို့လည်း ပြောတယ်”လို့ မသွဲ့သွဲ့ဝင်းက ပြောပါတယ်။ သူတို့က အစည်းအဝေးကို ရပ်ဖို့လုပ်ရာမှာ သူက အရပ်မခံခဲ့ဘူးလို့လည်း မသွဲ့သွဲ့ဝင်းက ပြောပါတယ်။ “ကျွန်မလည်း “အခု ကျွန်မပြောဖို့ အလှည့်”လို့ ပြောလိုက်တယ်။ အဲဒီတုန်းက အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို လက်ညှိုးထိုးပြီး “ရှင် လူကြီးလူကောင်းမဟုတ်ဘူး။ ဒီလို အစည်း အဝေးကို ကျွန်မကို နောက်ထပ် ထပ်မခေါ် နဲ့”လို့ပြောလိုက်တယ်” အဲဒီတုန်းက ရပ်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဟာ အခုအနားယူသွားပြီမို့ သူ့မှတ်ချက် ကို မရနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်မှာ ဒီလုပ် ငန်းကိုလုပ်ကိုင်နေတဲ့ ကနေဒါအိုင်ဗင်ဟိုး ကုမ္ပဏီနုတ်ထွက်သွားတဲ့နောက် တရုတ် လက်နက်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ “နိုရင်ကို” ရဲ့လက်အောက်ခံဖြစ်တဲ့ မြန်မာဝမ်ပေါင် ကြေးနီတူးဖော်ရေးက လက်လွှဲယူခဲ့ပါ တယ်။ အခုတော့ ဒီသတ္တုတွင်းကို တရုတ် ကုမ္ပဏီနဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ စီးပွားရေး ဦးပိုင်လီမိတက်တို့ ပိုင်ဆိုင်လုပ်ကိုင်နေ ကြပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတုန်းကကုမ္ပဏီဝန် ထမ်းအချို့က ဒေသခံတွေကို ရိုင်းစိုင်းတဲ့ အမူအရာတွေလုပ်ပြခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီမှာ ၀က်မှေးရွာသားတွေ မခံမရပ်နိုင် ဖြစ်ပြီး ဆန္ဒပြပွဲတွေ စခဲ့ကြပါတယ်။ မအေးနက်တို့နှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးတဲ့နောက် ထင်ရှားတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေ ဒီကိုလာပြီး သူတို့ကို လွှတ်ပေးဖို့ ညှိနှိုင်းရာမှာတော့ သူတို့ကို စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့မှာ လွှတ်ပေး ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီရဲ့ မန်နေးဂျင်း ဒါရိုက်တာ မစ္စတာကုံးယီကတော့ သူ့ဝန်ထမ်းတွေဟာ ဒေသခံတွေနဲ့ အဆင် ပြေအောင်နေလိုကြပြီး ရိုင်းရိုင်း စိုင်းစိုင်း အမူအယာတွေလုပ်ခဲ့တာ မရှိပါဘူးလို့ အီးမေးလ်နဲ့ ဖြေကြားပါတယ်။ ““ဒီမိုင်းတွင်းဟာ အလုပ်အကိုင် ထောင်နဲ့ချီဖန်တီးပေးနိုင်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလည်း အများကြီး အထောက်အကူပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီ မှာ မြန်မာဝန်ထမ်း ၂,၀၀၀ လောက်ရှိပြီး မကြာခင်မှာ ဒီအရေအတွက်ရဲ့ နှစ်ဆ လောက် ရှိလာနိုင်တယ်”လို့ သူကပြောပါ တယ်။ လောလောဆယ်မှာတော့ ဒေသခံတွေကို အတင်းအကြပ်ရွှေ့ခိုင်းဖို့ အစိုးရ မှာ စိတ်ကူးရှိဟန်မတူပါဘူး။ ဆားလင်း ကြီးမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမªး ဦးဇော်မိုး အောင်က အဲဒီလိုလုပ်ဖို့အစီအစဉ် အခု မရှိပါဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ကိစ္စဖြစ်ပြီးခဲ့ တဲ့နောက်မှာ မအေးနက်နဲ့ မသွဲ့သွဲ့ဝင်းတို့ နှစ်ဦးဟာ မန္တလေးကိုသွားပြီး လယ်ယာ မြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာကိစ္စအတွက် ရှေ့နေ တွေနဲ့တိုင်ပင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ် အာဏာပိုင်တွေဘက်က ၀င်ရောက်မှုတွေရှိ ရင် မှတ်တမ်းတင်ရအောင် ဗီဒီယိုကင်မရာ တစ်လုံးကိုလည်း ၀ယ်ယူခဲ့ကြပါတယ်။
------------------------------------------------------------ In Battle Over Myanmar Mine, Folk Heroines Emerge
“Whatever pressure they put on us, we won’t give up,” Ms. Thwe Thwe Win said in an interview in her village on the edge of the mine. “I want them to shut this project down completely.”br />
Myanmar’s new civilian government is moving swiftly towardaless dictatorial society, releasing hundreds of political prisoners and abolishing media censorship. At the United Nations on Thursday, the country’s president, Thein Sein, said Myanmar had “been taking tangible irreversible steps” toward democracy. But those changes areaworld away from the everyday realities of the impoverished countryside, where two-thirds of the population live.br />
Here, in the shadow of the bustling copper mine in Wethmay, the authorities are following the old playbook of repression and harassment.br />
Wethmay is one of two dozen villages affected by the plan to expand the mine. In December, the authorities tried to force its inhabitants to move by attacking the local monastery with hammers, carting away Buddhist statues and removing all the furniture and equipment from the primary school. These and other episodes promptedaseries of protests and clashes with the police, some of the largest demonstrations in Myanmar since the country’s civilian government came to power last year.br />
The police have been unbending. U Tint Aung, the chief of police of Monywa, the city where the two women were jailed, lashed out duringatelephone interview when asked why the women were being followed.br />
“Why should you care?” he barked. “So what if we follow them?”br />
The authorities also appear eager to keep foreign eyes away. Duringarecent two-day visit,areporter was constantly trailed by men on motorcycles, detained by immigration police for an hour and told not to return to the area. His interpreter was threatened with arrest.br />
The case has been widely reported in privately owned publications in Myanmar,ameasure of the country’s newfound freedoms. But in March,aprivate weekly newspaper, The Voice, was sued by the Ministry of Mines after citingareport by the country’s auditor general that pointed to corruption in the sale ofastake in the project to the Chinese company.br />
At the heart of the case are environmental concerns — opposition to the copper mine is being championed by environmental groups concerned that surrounding farmlands will be contaminated by runoff from the mine — and more broadly about land seizures.br />
Land grabs arealongstanding problem in Myanmar, and activists fear they may increase as international sanctions ease and foreign development money and other investment rush in. Despite two laws passed last month that seek to clarify the land rights of farmers and policies governing vacant land, Parliament and opposition party offices have been flooded with complaints. A Land Investigation Committee set up by Parliament is traveling this week to several spots in the country to investigate reports of land seizures.br />
“There has beenafailure to bring justice to farmers during the liberalization period — they are still marginalized,” said Tun Lin Oo,aco-founder of the Yangon School of Political Science, an organization that researches land rights, among other issues. The copper mine controversy appears to have resonated so deeply because of the strong-arm tactics used against Ms. Aye Net, 34, and Ms. Thwe Thwe Win, 29. “The struggle made them into iron ladies,” said Ant Maung,acelebrated poet who lives in Monywa. “This is life or death for them — they will defend it at the cost of everything.”br />
Mr. Ant Maung calls the case “a good test for the democratization process.” “Five years ago this would have been impossible — suchamovement would have been cruelly crushed,” he said. The trouble began two years ago, when the government offered new housing and compensation equal to three months of annual income to villagers if they agreed to move to make way for the mine. But some complained that the new housing was shabby and that they would lose their fields, and thus their ability to makealiving. When onlyahandful took up the offer, the authorities calledameeting and told villagers that they could leave or be evicted.br />
“They shouted at us and called us animals,” Ms. Thwe Thwe Win said. br />
She said they tried to end the meeting, but she interjected. “I said, ‘Now it’s my turn,’ ” said Ms. Thwe Thwe Win, who dropped out of school when she was 12 and spent her childhood foraging for mushrooms and plants in the hills where the copper mine now operates. “I pointed my finger at the governor: ‘You are notagentleman. Don’t call me again to this kind of discussion.’ ”br />
The governor, who has been replaced, could not be reached for comment. Villagers say they are even more determined to stay after seeing the relocation area:acollection of shoddily built houses inatreeless field.br />
Like the controversy over the Myitsone hydroelectric dam, another Chinese project that was suspended last year afterapopular outcry, the case of the copper mine has undertones of anti-Chinese sentiment commonly heard in Myanmar.br />
Two years ago, mining operations were taken over byasubsidiary ofaChinese arms and explosives manufacturer, Norinco, afteraCanadian company, Ivanhoe, pulled out. The mine is now jointly owned by the Chinese company and the business arm of the Myanmar military, known as the Union of Myanmar Economic Holdings.br />
Tempers flared in June when three Chinese employees of the mining company made rude gestures toward villagers andalocal employee rolledalarge rock toward them fromapile of mining debris. The villagers from Wethmay, which means “sleepy pig” in Burmese, were roused into action and began the series of protests.br />
After the arrests of Ms. Aye Net and Ms. Thwe Thwe Win this month, coverage in the national news media drew prominent former political prisoners here to help negotiate their release. They were freed on Sept. 14.br />
Geng Yi, managing director of the mine operator, Myanmar Wanbao Mining Copper, denied in an e-mail that his employees had made rude gestures or rolledarock toward villagers. He said the company wanted “to get along with the local community harmoniously by communicating, understanding and supporting each other.”br />
The mine, he said, “can generate thousands of jobs and contribute to the development of the surrounding area.” The company has 2,000 local employees,anumber that he said could double “in the near future.”br />
The government appears to have dropped the idea of evicting villagers. “For the time being, we have no plan to do that,” said Zaw Moe Aung, the governor of Salin Gyi township, who was appointed six months ago. But the women of Wethmay village are taking no chances. After the raid on the monastery, Ms. Aye Net and Ms. Thwe Thwe Win traveled the old British road to Mandalay,athree-hour drive, to consult with lawyers about land rights. They boughtavideo camera to record any future incursions by the authorities.br />
Ms. Thwe Thwe Win said she was readingacopy of the country’s 2008 Constitution. During military rule, generals ran the country by fiat, Ms. Thwe Thwe Win said. “Now we know there are rules,” she said. br />
Photo Description: Thwe Thwe Win, left, and Aye Net walked on the field near Wethmay in northwest Myanmar. The two women have gained national prominence for protestingacopper mining project on the edge of their village.br />